Izinkontileka Zokwakha zaseSouthwind: Ukusikeka kanye Nokucwilisa
Source: IVIRGINIA POWER CO. - Chesterfield Station eVirginia
Inkampani Yezokwakha yaseSouthwind (SWC) wayenenkontileka yokuthi enze umsebenzi wokuhlalisa iVictoria Power Company ezindaweni ezintathu (3) ezindaweni ezihlukene nokususwa komlotha kusuka kumayadi ama-cubic e-400,000 kuya kumamitha angama-cubic million asesiteshini sabo saseChesterfield.
I-14-inch Ellicott® I-Brand B-890 "Wheel-Dragon" red dredge isetshenziselwe ukwenza kahle (futhi ngendlela engabizi) ukususa umlotha komunye umcengezi bese uhambisa impahla ngepayipi eliningi uye ebhodini lokugcina. Amakhethini asetshenzisiwe asetshenziselwa ukulawula okuqinile okumisiwe kanye nokunciphisa umswakama endaweni yokukhipha eMfuleni uJames. Ukwengeza, izimo zezindawo zokugcina amanzi zonakala ngenxa yesimo sezulu esibi; Abasebenzi be-SWC babheke amazinga wamanzi futhi balawula ingcindezi kulevee ngokulawula izinga lokukhishwa kwamanzi nangokuhlinzeka ngamaphampu amabili (2) 10 ”. Iphrojekthi yaqedwa ngempumelelo ngesikhathi nangaphansi kwesabelomali.
I-Indiana - 1996
I-SWC, ezikhathini eziyisithupha ezihlukene, iqede ngempumelelo ukudiliza amachibi omlotha nezinto zokwakha ukwenza lula ukulahlwa komlotha endaweni evunyelwe impango. Umsebenzi ubandakanya ukugqugquzela nokususa amandla, ukwemba phansi, kanye nokwakha izindonga. Wonke umsebenzi wenziwe ngokuhambisana ngokuqinile nezincazelo zeklayenti nezinhlelo zokuqapha izinga lokulawulwa kwekhwalithi, ama-ejensi ombuso nawokulawula, kanye nefilosofi yaseSouthwind yeTotal Quality Management.
Qala Iphrojekthi Yakho Yokususa Amalahle Ngo-Ellicott